M/weynaha Puntland oo kulamo la yeeshay bulshada gobolka Mudug, iyo dadaalo lagu baadi goobayo raggii dilay wasiirka oo wali socda. [Akhris …] – Radio Daljir
Agoosto 7, 2009 12:00 b 0
Galkacyo, Aug 07 – M/weynaha dawladda Puntland Dr. C/rixmaan Shiikh Maxamed oo shalay duhurkii soo gaaray gudaha magaalada Galkacyo ayaa illaa iyo xalay ku hawlan kulamo is dabajoog ah oo uu la yeelanayo qaybaha kala duwan bulashada ku dhaqan gobolka Mudug, gaar ahaan magaalada Galkacyo.
Kulamada M/weynaha ayaa diiradda ku haya xog waraysi la xiriira dilkii loo gaystay wasiirkii wasaaradda warfaafinta Puntland alle ha u naxariistee Warsame Cabdi Sharwac, kaasi oo koox hubaysan oo dabley ahi ay ku toogteen gudaha magaalada Galkacyo 5-tii bishaan Ogoosto.
M/weynaha ayaa dhammaan bulashadii uu la kulmay waxaa uu kala hadlay sida ugu habboon ee xal buuxa looga gaari kala mushkiladda gobolka gaar ahaan dhacadadii ugu danbaysay ee lagu dilay Warsame Cabdi Shirwac, waxaana kulamadiisa ku waheliyey kuxigeenkiisa C/samad Cali Shire, guddoomiyaha golaha wakiillada C/rashiid Maxmed Xirsi, xubno badan oo ka mid ah golayaasha dawladda Puntland iyo sarakiisha ciidanka.
Md. Faroole, waxaa uu ku dheeraaday isla markaana uu u sheegay dadka gobolka ee uub kulamada la yeeshay in ay awood buuxda dawladda ku siiyaan soo qabashada raggii ka danbeeyey dilkii wasiirka, waxaana dhanka kale uu dadweynaha ka codsaday in aysan qaadin wax tallaabo ah oo jawaab u noqon-karta dilkii naxdinta badnaa oo ay dawladda u daayaan wax k qabashada arrintaasi.
Dhanka kalana waxaa wali socda dadaalo ballaaran iyo baaritaano dheeraad ah oo ay kub howl-lan yihiin ciidanka ammaanka ee dawladda Puntland, biritaanadaasi oo ku saabsan sidii caddaalada loo hor keeni lahaa raggii gaystay dilkii wasiirka, inkastoo aan wali si rasmi ah loogu guulaysan soo qabashada nimankaasi sida qaar ka mid ah saraakiisha ammaanku ay Daljir u sheegeen.
Xaaladda magaalada Galkacyo ayaa hadda deggan waxaana gaaf-wareegaya waddooyinka iyo goobaha kale ee caadiga ahba ciidanka bileyska dawladda Puntland, kuwaasi oo wada howlo ammaan sugid ah.
Dadweynaha reer Puntland ayaa sugaya tallaabada dawladda Puntland ay ka qaadan doonto dhacdadaasi, waxaana horay u jirtay dilal kala duwan oo gobolkan Mudug loogu gaystay rag sumcad weyn ku dhaxlehaa bulashada oo aysan dawladdu tallaabo adag ka qaadan.
Guddoomiyaha gobolka Mudug Geesey oo iska fageeyey eedaymo ku saabsanaa in uu ku lug lahaa dilkii wasiirkii warfaafinta Puntland.[Akhris …]
Madaxada sare ee Puntland oo ka qayb galay aas qaran oo loo sameeyey Alle ha u naxariistee Warsame Cabdi Shirwac. [Dhegaysi …]